Meerto kala duwan
Soomaaliya gudaheeda ayaa ururka Médecins Sans Frontières/Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn (MSF) waxaa uu ka wadaa 13 barnaamijyo caafimaad-nafaqo ah. Ilaa 5,500 carruur ay nafaqo-xumo hayso ah ayaa quudin-ku-daweyn loo sameynayaa halka ku dhowaad 500 carruur ahi oo ay la silcaya dhibaatooyin caafimaad oo ugu darsamey nafaqo-xumada haysata, lagu dabiibayo siddeed Xarumaha Quudin-ku-daweynta Degdegga ah. “Jadeecadu waa cudur hawada soo raaca waxaana xaaladaha dadku ay is-dul-tuban yihiin ee xerooyinka ka jira ay u abuurayaan dhammaan waxyaabihii uu cudurku u baahnaa si uu u faafo. Carruurta ay nafaqo-xumadu hayso ee shan sano jirka ka yar ayaa ah kuwa halista ugu weyn ku jira. Waxaa ay dhexda u galaan meerto arxan-daran oo jadeeco iyo nafaqo-xumo ay baabi’inayaan difaaca jirkooda tabarta daran taas oo u sii dhiibeysa cudurro sida oof-wareen iyo shuban ah. arrinta muhiimadda koowaad leh marka ay jiraan xaaladaha noocan ah ee degdegg ah waa in dadka laga tallaalo jadeecada iyo in si degdeg ah loo daweeyo xaaladaha cudurka ee la soo ogaan karo,” ayaa ay tiri Dr Susan Shepherd oo ah khabiiradda nafaqada ee MSF.
Joojinta jadeecadu – waa adag tahay laakiin waa mid la sameyn karo
MSF waxaa ay horeyba in ka badan 50,000 oo carruur ah uga tallaashey jadeecada tan iyo bishii Luuliyo ee sanadkan in kasta oo ay jireen